Satọde, Febụwarị 5, 2011 Douglas Karr
Site n'oge ruo n'oge, anyị nwere atụmanya na-abịakwute anyị ma jụọ anyị ka anyị tinye ọnụahịa ọrụ na njikarịcha njin ọchụchọ. Ndị mmadụ, njikarịcha njin ọchụchọ abụghị ọrụ. Ọ bụghị mgbalị ị nwere ike mechaa n'ihi na ị na-awakpo ebumnuche na-agagharị. Ihe niile gbanwere na ọchụchọ:
Nchọgharị ọchụchọ na-agbanwe algọridim ha - Google na - agbanwe mgbe niile iji debe n’ihu ndị spammers na, na nso nso a, ugbo ọdịnaya. Ghọta otu esi ewepụta ọdịnaya gị mgbe mgbanwe ndị a mere nwere ike melite nsonaazụ gị. Adjustghara ịgbanwegharị nwere ike lie gị saịtị. Ọ naghị adịkarị njọ, mana anyị na-ahụ mgbanwe na ndị ahịa anyị.
Ndị asọmpi gị na-agbanwe usoro nchọta ihe nchọta ha - Gị mpi na-eme mgbanwe ka ha na saịtị na eleghị anya nwere ụfọdụ oké SEO ndụmọdụ na-enyere ha aka. Y’oburu n’inwe nguzo ike ma nwekwaa ezigbo nguzo na ntukwasi-obi, obu nani oge tupu asọmpi gi amalite itinye ego na atụmatụ.
Atụmatụ ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa na ọrụ gbanwere - Kedu otu ụlọ ọrụ gị si amata ọdịiche dị na asọmpi a na-agbanwekarị oge ka ị na-eto, na-agbada ma ọ bụ na-emepe atụmatụ ọhụrụ, ngwaahịa na ọrụ. Nchọgharị ọchụchọ gị ga-agbaso na nke a.
Isiokwu ojiji mgbanwe - Oge ụfọdụ, mkpụrụ okwu ndị ọrụ ga-achọ na-agbanwekwa oge. Dị ka ihe atụ, ngwa, n'elu ikpo okwu, na software ha niile nwere ọkwa ọchụchọ dị iche iche na ụlọ ọrụ teknụzụ. Agbanyeghị na enwere ike iji ha niile n'otu aka ahụ, ojiji ha agbanweela na ewu ewu oge.
Mpịakọta ọchụchọ na-agbanwe - Oge nke ụbọchị, ụbọchị nke izu ahụ, mgbanwe ọnwa na oge enwere ike ịmetụta ọchụchọ niile. Ozi gị na ọdịnaya gị nwere ike ịgbanwe iji kwado ya.
Teknụzụ nyiwe gbanwere - Anyị ahụla ụfọdụ saịtị mara mma nke fọrọ nke nta ka ọ funahụ na nsonaazụ ọchụchọ kemgbe ha Achọpụtaghị CMS ma ọ bụ na-ekwurịta okwu na search engines. Y’oburu na inwee ochie CMS nke amatabeghi, o yikarịrị ka ị ga-efunahụ ikike ịkwalite okporo ụzọ njin ọchụchọ.
Saịtị dị mkpa gbanwere - Gịnị bụbu ihe ndị kasị ewu ewu na saịtị gị ụlọ ọrụ nwere ike agaghịkwa ịbụ… saịtị ikike ịgbanwe oge niile. Gbaa mbọ hụ na saịtị gị kwalitere na saịtị ndị kachasị ga-aga n'ihu na-eme ka ọkwa na ọkwa gị dị elu.
Inwe onye na-enye ndụmọdụ ma ọ bụ ndenye aha na-aga n'ihu na nnukwu SEO onye na-eweta ọrụ ga-enye ụlọ ọrụ gị ezigbo nkwụghachi na ntinye ego ma ọ bụrụ na ọchụchọ ọchụchọ dị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere akụ dị n'ime iji rụọ ọrụ na ọchụchọ, ndenye aha na SEOmoz or gShiftLabs na ụfọdụ ngwaọrụ nlekota kwesiri ọnye ego.
Mgbe ndị ahịa anyị nwere ike ijide mgbanwe ndị a, anyị na-aga n'ihu ịhụ nloghachi na ntinye ego na-abawanye, ọnụ ahịa ha na-aga n'ihu na-adaba, ha na-enwekwa ike ịmecha ọchụchọ maka nnweta ndị ahịa ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ na-achọ nlekota na mmelite na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO na-arịọ ụlọ ọrụ gị nke nwere ụgwọ ọrụ ọkọlọtọ ebe ha ga-ebuli saịtị gị maka ego akwụpụtara wee pụọ, ị nwere ike ịchọrọ ịtụgharị ego ahụ.
Tags: nsonaazụ azụmahịaCokevidiyo nyocha nke ndị ahịa
Feb 5, 2011 na 11:02 PM
Feb 5, 2011 na 11:47 PM
Feb 10, 2011 n’elekere 12:05 nke abali
Ekwenyere m na gị!